သမ္မတရှီက တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေး ပန်းတိုင်ရောက်ရှိရန် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်ကိုချပြ - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးစိတ်ကွဲများဆိုင်ရာ ကွန်ဗားရှင်း ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ COP15 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် ကျင်းပစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရေးနှင့် ကာဗွန်အလယ်အလတ်အဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ရေး ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိစေရန် အဓိကနယ်ပယ်များ နှင့် ကဏ္ဍများတွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု အမြင့်ဆုံးလျှော့ချရေးဆောင်ရွက်မှုအပြင် များစွာသော ထောက်ခံအားပေးသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများနှင့်ပတ်သက်၍ အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်များကို ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးစိတ်ကွဲများဆိုင်ရာ ကွန်ဗားရှင်း ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ (COP15)၏ ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပေကျင်းမြို့၌ ရုပ်သံလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထိုကဲ့သို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းက တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရေး နှင့် ကာဗွန်အလယ်အလတ်အဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ရေး မူဝါဒရေးရာ မူဘောင်ဖြစ်သော “ 1+N ” တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရှီက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကြီးမားသော လေစွမ်းအင် နှင့် သဲသောင် ၊ ကျောက်ဆောင် နှင့် ကန္တရာဒေသများတွင် photovoltaic (နေရောင်ခြည်) ကိုခြေပြုသော နေစွမ်းအင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းတွင် လျင်မြန်စွာတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပမာဏ ခန့်မှန်းခြေ ကီလိုဝတ် သန်း ၁၀၀ ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်းတစ်ခုနှင့်အတူ ယင်းစီမံကိန်းများ၏ ပထမအဆင့်အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သူ ရှီကဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 12 (Xinhua) — To achieve its carbon peak and neutrality targets, China will release implementation plans for peaking carbon dioxide emissions in key areas and sectors as well asaseries of supporting measures, Chinese President Xi Jinping said Tuesday.
China will make faster progress in planning and developing large wind power and photovoltaic bases in sandy areas, rocky areas and deserts, said Xi, who revealed that the first phase of projects with an installed capacity of approximately 100 million kilowatts have recently started construction. Enditem